China Umdaka kunye nesiponji esomileyo sesipontshisi seSanti kubavelisi abaColiweyo kunye nabathengisi Xieyanshi
Iibrasives zinokusetyenziselwa umsebenzi wokulungisa imoto, ukhuni okanye ukuqhubekeka kwephaneli.
Iinkozo zealuminium ukubonelela ngesanti ngokukhawuleza.
Isakhiwo sokutyabeka esivulekileyo, ukwandisa ukuhlala kunye nokuthintela ukuvalwa.
Ifanelekile kakhulu kwisanging yesandla, indawo yeplastiki egobile okanye ifanitshala.
I-XYS Sponge Sanding Sandpaper
Sponge grIndIng ibhloko, ekwabizwa ngokuba yi-sponge sandblock, ibhloko ye-pollshIng grlndIng, ibhloko ye-resln grlndIng, ibhloko ye-abraslve grIndIng, ibhloko ye-plastlc, njl njl.
lt yeyona nto ifanelekileyo yokugaya umphezulu womhlaba, kwaye ayikwazi ukufaka amanzi kunye nokugcina amanzi kwi-tlme ende. Inokuphinda ifake isandpaper yamanzi. I-Sponge grIndIng blockscan yenziwe i-lnto varlous iimilo kunye ne-speclflcatlons.
I-Softback Sanding Sponge isanti ekunzima ukufikelela kuyo kwiimoto, iilori kunye neeveni ezinje ngeendawo ezivulekileyo zentloko, izibambo zomnyango, iijango zeminyango kunye nezinye iindawo. Ukuthamba okuguqukayo, okuguquguqukayo okuxhasa amagwebu kungqinelana nayo nayiphi na iprofayili okanye imilo esithuthi. Ezi ziponji zigqunywe nge-aluminium oxide ehlala ihleli.
Yenza Ubunzima beSanding kube lula
Xa ufuna ukwenza isanti kwindawo ekunzima ukufikelela kuyo, okanye ufuna ukwenza isanti ngokufanayo kwiprofayili eyahlukileyo, khetha iSiponji esisiSandback esikwaziyo ukuhambelana nayo nayiphi na imilo okanye ukufikelela kwiindawo ezinzima. Ukuxhaswa kwe-foam ethambileyo kuguquguqukayo kunephepha eliqhelekileyo elixhaswe ngesandpaper. Ukufikelela kwiindawo ezixineneyo, ukuxhaswa kwe-foam kwenziwe kwancinci xa kuthelekiswa nezinye iziponji zesanti. Sebenzisa ezi siponji kwizicelo zesanti zesandla apho ufuna ukuchaneka ngakumbi kunye neenkcukacha kunokuba kunokufezekiswa ngeendlela zokwenza umatshini ngomatshini.
Izinto zeArasras: IAluminiyam iOxide
Izinto Base: iphepha ibala ngqo Sponge
Ngcina: izakhi nentlaka
Uluhlu lweGrit: P180-P800
Isiponji sithambile kwaye siyabhetyebhetye, silungele imiphezulu yesanti efakwe kwiifayile kunye nezingaqhelekanga, ekunzima ukufikelela kuzo ngesandla.Luncedo kakhulu kumzi mveliso weemoto nakwisebe lokulungisa imoto. Isiseko se-foam sisebenzisa uxinzelelo ngokulinganayo, ukunciphisa umngcipheko wentlabathi ngaphezulu.
Okulandelayo: Ishedyuli yeSandpaper Sheet yeRandom Orbital Sander-A720T